JCCrystal brand na ọ nwere a dịgasị iche iche nke ngwaahịa, gụnyere ewepụghị azụ hotfix nkume, ewepụghị azụ dịghị hotfix nkume, ikwa-on nkume, Mc chatons, fancy nkume, fancy nkume ntọala, cup ígwè, epoxy hotfix studs, na rhinestone enyefe, etc . Ọ na-eji dị ọcha raw iko ihe onwunwe na elu CNC egweri equipments na agụụ ion plating usoro iji hụ na stones'shininess na ezi ọnwụ anya.
JCCrystal - Ngwa kristal kachasị mma na ngwa kristal sitere na China
JCCrystal brand na ọ nwere a dịgasị iche iche nke ngwaahịa, gụnyere ewepụghị azụ hotfix nkume, ewepụghị azụ dịghị hotfix nkume, ikwa-on nkume, Mc chatons, fancy nkume, fancy nkume ntọala, cup ígwè, epoxy hotfix studs, na rhinestone enyefe, etc . ọ na-eji dị ọcha raw iko ihe onwunwe na elu CNC egweri equipments na agụụ ion plating usoro iji hụ na nkume 'shininess na ezi ọnwụ anya. Dabere na mmepụta nke China nke nwere, JCCrystal bụghị naanị uru nke ọnụahịa dị ala, kamakwa ọ ga - ekwe nkwa ogo ahụ.
JCCrystal nwere ike ịnye rhinestone otu nkwụsị ngwọta maka ndị ahịa.
Anyị nwere crystal akụrụngwa factory, na-emepe emepe na n'ichepụta dị iche iche shapes nke crystal ọcha.
Anyị nwere crystal ngwa factory, nwere fancy nkume ntọala (gụnyere okpueze imewe, D udi imewe, ifuru imewe, rim imewe, oge gboo ọnọdụ, wdg).
Productdị Ngwaahịa Rhinestones
7 ụbọchị sample iji oge Nkwado
Ihe Glass, Glass ihe
Akara Otutu, Otutu
Jiri Akpa, uwe, Ntu Art, Shoes
Nọmba Model CE032502
Aha ahia Kechie na nkume
Nha ahaziri Size
Ojiji agbamakwụkwọ Dress
Nlele Nlele n'efu
Njirimara Environment Nnyocha
Kwụ .gwọ Nkwenye Azụmaahịa
mbupu ụzọ DHL FedEx EMS gbasie Express
Single ngwugwu size: 2X1X1 cm
Single oke ibu: 0.009 n'arọ
Ngwugwu Type: obere size 240 ibe otu ọcha akpa, iri akpa otu igbe, isii igbe otu katọn. Dị ka ị rịọrọ.
Ikwa On rhinestones Beautiful reflective Uwe Kpụrụkpụrụ Ọlamma Bulk Rhinestone bọtịnụ
A na-enweta beads kristal n'ọtụtụ na-adịghị agwụ agwụ nke ụdị, nha na agba nke enwere ike iji ya rụọ ọrụ n'ọtụtụ ụzọ.
Rhinestones na beads bụ ihe ndị a na-achọkarị. A na-enyerịrị onyinye kacha mma na ahịrị ụdị bead na-atọ ụtọ nke enwere ike ijikọ ọnụ n'ọtụtụ ọdịiche. Enwere ike iji beads kristal anyị maka imepụta ọla ndị eji achọ mma na ihe ndị ọzọ na-ewu ewu dịka ngwa, ihe ịchọ mma, akwa mkpuchi wdg.
* Designslọ dị iche iche na-agbagochi ọhụrụ.
* Ọnụahịa kachasị mma na nnyefe ọsọ ọsọ na-adabere n'ịdị mma ịchọrọ.
* Ahịa nke afọ ojuju na mgbe a rụchara ọrụ ahịa.
Ikwa On Fancy Stone
N'onwe, mma, uwe wdg
Nke gara aga: N'ogbe ahia di nma, miyuki nkpuru kwo ahija nke puru iche maka ihe eji achọ mma
Osote: 2mm ekebeghi olu nke gemstone bu ihe eji eme ya
Ikwa On Crystal rhinestones
Wkwanye Glass Rhinestones
Ikwa On Rhinestone Kpaa
W ga na Rhinestones nnukwu
Ikwa On rhinestones N'ihi Uwe
China kristal iko beads na nnukwu, N'ogbe ro ...
Bohemian ejiji tila bead ejiri mee ihe nke igwe nwoke